Digniin ama yareynta gunnada shaqo meelaynta - Arbetsförmedlingen
Digniin ama yareynta gunnada shaqo meelaynta
Waxaa dhici karta in laguu digo haddii aadan raacin qorshaha aan ku heshiinnay. Haddii aad marar badan jebiso ballantaas waxaad maalin ama ka badan waayi kartaa lacagta meeleynta.
Maxaad samayn doontaa haddii digniin lagu siiyo ama lacagta meeleynta lagaa dhimo?
Waxaad marka hore naga heleysaa go’aan hordhac ah. Inta aannan gaari go’aanka kama dambaysta ah waxaa fursad lagu siinayaa inaad soo gudbiso ra’yigaaga. Waxaad ku soo qoreysaa foomka “Jawaab ka bixinta xiriirka” oo la socda warqadda go’aanka hordhaca ah. Buuxi oo ku soo dir foomkaas adareeska ku qoran.
Haddii aadan ku qanacsanayn go’aanka kama dambaysta ah waxaad codsan kartaa inaan dib uga fiirsanno. Markaas waxaad buuxineysaa foomka ”Codsi dib uga fiirsasho” oo noo soo dir.
Haddii aad si fiican shaqo u raadsan
Haddii aadan raacin qorshihii aan ku heshiinnay waxaad markaas noqoneysaa qof aan si fiican shaqo u raadsan.
raacin heshiiskii inaad noo timaaddo ama nala soo xiriirto
ka qaybqaadan hawlaha barnaamijka meeleynta
codsan shaqo ama waxbarasho lagugu la taliyey
si firfircoon shaqo u raadsan sida ku qoran qorshihii aan ku heshiinnay.
Marka ugu horreysa: waxaa lagu siinayaa digniin
Marka afraad: 10 maalmood oo lacag la’aan ah
Marka shanaad iyo wixii ka dambeeya: 45 maalmood oo lacag la’aan ah.
Haddii aad dheereysto waqtiga shaqala’aanta
Haddii aad diiddo inaad ka qaybgasho barnaamijka laguu diray ama shaqo laguu helay waxaad markaas noqoneysaa qof waqtiga shaqala’aanta dheereysanaya.
diiddo shaqo ama waxbarasho kugu habboon oo laguu diray
si cad uga hortimaaddo in lagu shaqaaleeyey
diiddo inaad ka qaybgasho barnaamijka meeleynta.
Haddii aad adigu sababtay inaad shaqala’aan noqoto
Haddii aad shaqada ka ruqseysato shaqada waxay noqoneysaa qof shaqala’aan isu sababay.
keento sabab khasab ka dhigta inaad shaqada ka tagto.
45 maalmood oo lacag la’aan ah.
Haddii si kale uga soo bixi weydo wixii lagu heshiiyey
Tusaale haddii aad arbushto dadka kale oo barnaamijka ka qaybqaata, waxaan go’aamin karnaa inaan kaa joojinno barnaamijka meeleynta.
Haddii aad si u la kac ah u soo gudbiso warbixino qalad ah
Försäkringskassan waxay go’aan ku gaari kartaa inay lacagta kaa joojiso muddo dheer. Taasi waxay dhacaysaa haddii aad si u la kac ama taxadar la’aan ah Försäkringskassan ugu soo gudbiso warbixino qaldan ama been ah si aad u hesho lacag aadan xaq u lahayn.